Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguAmber
Relax kwaye wonwabele iBay yeZiqithi ezimangalisayo ukusuka kweyakho i-oasis enoxolo ebekwe entliziyweni kaRussell odlamkileyo. Eli gumbi limnandi lokulala iHarbourmaster Apartment libonelela ngendawo yokuhlala nje amanyathelo kude noRussell elunxwemeni kunye ne-esplanade. Yonwabela ithala labucala elinombono wegadi kumgama nje ohamba ngemizuzu emibini ukusuka eRussell Wharf, ePompallier House kunye neevenkile ezimnandi kunye neendawo zokutyela eRussell Village. I-WiFi ibandakanyiwe kunye nekhitshi ene-microwave, ifriji, iti kunye nezibonelelo zekofu
Ikwindawo nje yokuphosa ilitye ukusuka eRussell Beach, mamela ukubethwa kwamaza elunxwemeni ebusuku kwaye wonwabele intaka ejikeleze le ndlwana iyimbali. Kutshanje ihlaziywe kwindawo yangoku uyilo olulodwa lubonelela nge-oasis epholileyo, enoxolo enebhedi esemgangathweni kunye nelinen yokulala ubusuku obugqibeleleyo kunye negumbi lokuphumla elitofotofo kunye nekhitshi elibandakanya i-Smart TV enomoya wasimahla, iNeon kunye neNetflix.
Iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise i-ofisi yabucala edityaniswe nendlu enkulu (ufikelelo lwabucala).
Ngolwandle lukaRussell olungaphantsi kwe-100m ukusuka kumnyango wakho kunye neLong Beach umgama nje ongamashumi amabini wokuhamba, siqinisekisa ukuba ululungele ulwandle ngokusetyenziswa okuncomekayo kweetawuli zaselwandle zaseWallace Cotton, izitulo zaselwandle kunye nemathi yaselwandle. Iingxowa zokupholisa kunye nezinto zepikiniki zifumaneka xa ziceliwe.
Uya kukuthanda ukusondela kwiSupermarket yesine yasekhaya, iKitchen yaseHone kunye necafe entle ePompallier House.